I-IPFS 0.9 iza nohlelo lwayo lokuxazulula i-DNS, ukuthuthuka kwezokuphepha nokuningi | Kusuka kuLinux
Muva nje ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yohlelo lwefayela olusabalalisiwe IPFS 0.9 (InterPlanetary File System) lapho kugqanyiswa khona lokho ama-go-ipfs alungiswa ngokwengeziwe, kanye ne ukulungiswa okukhulu, ukulungiswa kokuphepha okubucayi nokuthi ezinye izici ezingasetshenziswanga ngokujwayelekile ziyehliswa noma zisuswe ukuze kube lula kubasebenzisi ukuthola izindlela ezilula zokusebenzisa ama-go-ipfs ngokuphepha nangendlela efanele.
Yakha isitolo sefayela esenziwe ngomhlaba wonke esenziwe ngendlela yenethiwekhi ye-P2P eyenziwe ngezinhlelo zamalungu. I-IPFS ihlanganisa imibono esetshenziswe ngaphambilini ezinhlelweni ezinjengeGit, BitTorrent, Kademlia, SFS, kanye neWebhu, futhi ifana neqoqo elilodwa leBitTorrent (ngababili ababamba iqhaza ekusatshalalisweni) okushintshana ngezinto zeGit. I-IPFS ibhekiswa ngokuqukethwe kunendawo nendawo namagama aphikisayo.
Izici ezintsha eziyinhloko ze-IPFS 0.9
Kule nguqulo entsha evezwe nge-IPFS 0.9 amasango anamandla okulayisha i-IPLD ngokungafanele (I-Interplanetary Data Linked, i-namespace yokubhekana nezinsizakusebenza ezenzelwe i-hash) nge-handler "/ api / v0 / dag / export", eyenza umsebenzi ofanayo kumyalo we- "ipfs dag export".
Ukuthunyelwa kwenziwa ngefomethi yefayela le-DAG (Kuqondiswe i-Acyclic Graph). I-IPLD evelayo ivumela umsebenzisi ukuthi aqinisekise ukuthi idatha elandwe esangweni lomphakathi ifana negama elingokomfanekiso eliceliwe elingaqinisekiswa ngalo ukuthobela i-hash yokuqukethwe ekuqaleni ehlotshaniswa nophawu lwegama.
Okunye okusha okuvezwayo yilokho inikeze amandla okuchaza isixazululi sakho se-DNS kusetshenziswa umthetho olandelwayo we- "DNS over HTTPS", ozosetshenziswa esikhundleni sohlelo lokuxazulula ekucushweni kohlelo lokusebenza. Lokhu kufaka phakathi ukweqa isixazululi kuzizinda ezizodwa eziphezulu.
Ku-DNSLink, indlela yokuxhumanisa amagama ejwayelekile e-DNS kumakheli we-IPFS, ukufaka esikhundleni sokuxazulula okukhethiwe kungasetshenziselwa ukudala amagama wesizinda angahlobene ne-ICANN, ngokwesibonelo ungaxhuma isixazululi ukuphatha izizinda ezisezingeni eliphezulu ».eth«, Which awavunyelwe ngokusemthethweni yi-ICANN.
Futhi, isikhombimsebenzisi sewebhu (I-WebUI) ibuyekezwe ngokusekelwa kokuhlola kokuphina izinsizakalo zangaphandle (okufana nomyalo othi "ipfs pin remote service") nokwakhiwa kwezikrini ezisebenza namafayela nozakwabo kushintshiwe.
Ngenkathi ye- isikhombimsebenzisi se-CLI, manje kungenzeka ukuthekelisa okhiye usebenzisa umyalo "Ipfs key export" ngaphandle kokumisa inqubo ye-ipfs ngemuva.
Kuyaziwa futhi ukuthi iklayenti lokuhlola le-DHT lengezelwa ukuthola idatha kusetshenziswa ithebula le-hash elisatshalalisiwe, elihlukile kusisombululo esisekelwe ku-IPNS ekusebenzeni okuphezulu nokusekelwa kwe-SECIO kwehlisiwe futhi kukhutshazwe ngokuzenzakalela ngenxa yokuxhaphaka kokusekelwa. Ukusekelwa kwe-SECIO manje sekususwe ngokuphelele.
Ekugcineni futhi kushiwo ukuthi izinto zokufudukela ezinhlotsheni ezintsha zama-go-ipfs zihlukaniswe ngamaphakeji hlukanisa ukusheshisa ukulayishwa nokwenza lula ukuhlela izibuyekezo kuzilungiselelo nama-plugins wazo. Inqubo yokulanda izibuyekezo ngaphezulu kwe-IPFS yenziwe nge-automated futhi amasethingi afakiwe ukwenza lula ukusetshenziswa kwezibuyekezo uma kungekho ukuxhumana kwenethiwekhi noma kuvinjwe yi-firewall.
Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho mayelana nale nguqulo entsha ekhishiwe, ungabheka ifayela le- imininingwane kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-IPFS 0.9 iza nohlelo lwayo lokuxazulula i-DNS, izithuthukisi zokuphepha nokuningi
I-DUR, i-analog ye-AUR kaDebian, isanda kukhishwa